Steve Jobs၊ Bill Gates၊ သူတို့Relationship နဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးစများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Steve Jobs၊ Bill Gates၊ သူတို့Relationship နဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးစများ
Steve Jobs၊ Bill Gates၊ သူတို့Relationship နဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးစများ
Posted by မြစပဲရိုး on Jan 1, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
Internet မရှိတော့ရင် ကျွန်မတို့ ဘဝကြီး ဘယ်လောက်ခြောက်သွေ့ သွားလိုက်မလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ဘူးကြပါသလား။
တကယ်တော့ Internet ရဲ့ Idea က တော့ ၁၉၆၁ မှာ စခဲ့တယ်လို့ မှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ ခေတ် မှာတော့ ကျွန်မတို့ လို သာမာန် သုံးစွဲသူ အနေနဲ့ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးနေ တဲ့ Internet ထဲမှာ Information, Document Text, Images, Multimedia Files စတာတွေ ပါတဲ့ Page တွေ ကို Internet က တစ်ဆင့် ကိုယ့် ကွန်ပျုတာ Monitor/ Mobile Screen တွေပေါ်မှာ ကြည့်လို့ ရအောင် ထွင်ထားတဲ့ WWW (or) W3 (or) World Wide Web လို့ခေါ်တဲ့ System ကတော့ ၁၉၉၁ မှာမှ စခဲ့တယ်လို့ သိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၁နဲ့၁၉၉၁ “နှစ် ၃၀” အတွင်း ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဝ တွေကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် လွှမ်းမိုးစေမဲ့ တီထွင် မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေ ကတော့ Apple ရဲ့ Macintosh နဲ့ IBM/Microsoft ရဲ့ PC (Personal Computer) တို့ ဆိုတာ၊ Apple ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် က Steve Jobs ဖြစ်ပြီး Microsoft ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ကတော့ Bill Gates ဆိုတာ၊ သူတို့ နှစ်ယောက် ဟာ ကွန်ပျုတာလောက ရဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူ Pioneer တွေ အဖြစ် သမိုင်းမှာ တွင်ကျန် နေတာ ဆိုတာ တွေဟာ လူတိုင်း အသိပါ။ တကဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေထဲမှာ သူတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ အတူ ကွန်ပျူတာ လောက ရဲ့ Pioneer တွေရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာတော့ သမိုင်း ဖြစ်စဉ် ကို ဒီလောက် အကျယ်မချဲ့ တော့ပါဘူး။
ကျွန်မ အနေနဲ့ အရင်က သိခဲ့ဘူးတာက သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ နည်းပညာမှာ ပြိုင်ဖက် တွေလို့ ဘဲ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း သိခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ Business မှာ ဒီလို အချင်းချင်း ပြိုင်ကြ၊ ကိုယ့် Product မနိုင်နိုင် အောင်လုပ်ကြတာတွေဟာ ဘာဆိုဘာမှ မထူးဆန်း တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ Steve Jobs ကွယ်လွန်ပြီးနောက် မှာ ဆောင်းပါးတွေ၊ သတင်းတွေ၊ Documentary တွေအရ သူတို့ နှစ်ဦး ရဲ့ နောက်ကြောင်း ကို ပြန်ကြည့် ခဲ့မိပါတယ်။
ဒီမှာတင် သူတို့ နှစ်ယောက် အစပိုင်း မှာ ဘယ်လောက် နီးကပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာသိလာ ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီကနေပြီး ပြိုင်ဖက် ဆိုတာနဲ့ ကြိုးမျှင်မျှင် လေးခြား နေတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ လှပတဲ့ Relationship ကို တွေ့လိုက် မိပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်မ ဆက်ပြောမဲ့ အကြောင်းတွေ ဟာ သူတို့ နှစ်ဦးကြားမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ ပြောခဲ့တာတွေပေါ်အခြေခံပြီး ကျွန်မ အတွေး ကို ပြောမှာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်မ အတွေးတွေ ဟာ မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား ခြောက်ယောက် ဆင်တစ်ကောင် ကို စမ်းပြီး ကိုယ် ထင်ရာ ပြောသလို ပြောတာမို့ အမှန်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ “ကျွန်မက ရုပ်ရှင်တကား ကြည့် ပြီး ခံစားကြည့် တာ လို့” သဘောထားကြပါ။
ဒါပေမဲ့ အချက်အလက် တွေ မှား နေခဲ့ ရင်တော့ ပြင်ပေး ကြပါ။ ဒါမှ တစ်ခြားစာဖတ်သူ များ အလွဲသိ သွား ခြင်း မဖြစ် သလို ကျွန်မ လဲ အချက် အလက်မှန် ကို သိပါ့မယ်။ အဲဒီ အတွက် ကြို ပြီး ကျေးဇူးတင် ပါ တယ်။
စိတ်မပူကြပါနဲ့။ သူတို့သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကို အကျယ်မချဲ့ပါဘူး။:-)
သူတို့ နှစ်ယောက် စသိပုံ အကျဉ်းချုပ်ရယ်။ Turning Point တစ်ခုရယ်။ Steve Jobs ရဲ့ Key Note ထဲက အကြောင်း တစ်ခုရယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆုံပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ Interview တစ်ခု ကစကား တစ်ချို့ အကြောင်း ရယ်ပါဘဲ။
၁၉၇၅ မှာ Apple ကို Steve Jobs နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း Steve Wozniak တို့ စတဲ့ အချိန် Bill Gates ကလည်း သူ့သူငယ်ချင်း Paul Allen နဲ့ Altair ကွန်ပျူတာ ပေါ်မှာ Application တွေ Run လို့ ရနိုင်စေမဲ့ Language အတွက် Altair Basic လို့ခေါ်တဲ့ Interpreter ကို စရေး နေပါပြီ။ အဲဒါဟာ Paul နဲ့ Bill ရဲ့ ပထမဆုံး Product ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် Micro-Soft လို့ဆိုပြီး နှစ်ယောက်သား Partnership လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။ နောင် IBM Personal Computer (IBM PC) အတွက် Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) ပေါ်မှာလဲ Microsoft့ BASIC Language ဟာ ပထမဆုံးသော Computer Programming Language ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ Bill Gates နဲ့ သူ့ရဲ့ Microsoft Team ကို Steve Jobs က ငှါးပြီး ($31,000 နဲ့) “Apple မှာသုံးဖို့ Application တွေ” အတွက် Applesoft Basic ကို ရေး စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ Relationship အစပါဘဲ။
၁၉၈၃မှာ Steve Jobs က PepsiCo ရဲ့ Technical President John Sculley ကို Apple ရဲ့ President and CEO အဖြစ်လုပ်ဖို့ ဆွယ်ပြီး ငှါးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူ့လောက် နည်းပညာ မှာ ဗဟုသုတ မရှိသူမို့ သူ့ကို မကျော်နိုင်ဘူးလို့ တွက်မိလို့ လားတော့ မသိပါဘူး။ အဲဒီ လူက သူ့ကို Apple ကနေ ၁၉၈၅ မှာ ကန်ထုတ် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူဟာ NeXT ဆိုပြီး Company အသစ် ထောင်ပါတယ်။ ဒီမှာတင် “Apple က Steve Jobs ဟာ NeXT မှာ Apple ရဲ့ နည်းပညာတွေ ကို ယူပြီး သုံးပါတယ်” ဆိုပြီး တရားစွဲပါသေးတယ်။
(အတော်လေး တရားကျဖွယ် လောက ပါဘဲ)
နောက်ပိုင်း Microsoft က အရှိန်နဲ့ ထိုးတက်လာချိန် မှာ Apple ရဲ့ Product တွေ မအောင်မြင်တာ ဖြစ် Stock Share ဈေးများ ထိုးကျကာ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၇ မှာ Apple က NeXT ကို ဝယ်ပြီး Steve Jobs ကို Advisor အဖြစ်ပြန်ခေါ် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် လက်ရှိ CEO Gil Amelio ကို ပြန်ကန်ထုတ်ပြီး Steve Jobs ဟာ interim CEO ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရာထူး Nickname က “iCEO” တဲ့။
Steve Jobs ရဲ့ Key Note – Boston MacWorld Expo (၁၉၉၇)
Apple ကို Steve Jobs ပြန်ရောက်ချိန် Apple ဟာ Bankrupt ဖြစ်လု ဆဲဆဲ ပါဘဲ။
Steve Jobs ဟာ Apple ကို ပြန်ရောက်ပြီး နောက် ပထမဆုံး Keynote ကို Boston MacWorld Expo – ၁၉၉၇ မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူစပြောချိန် လက်ခုပ်သံ တစ်ချို့ဘဲ ရှိပြီး “ဘူး” အလုပ်ခံရတာ က အကြိမ်ပေါင်း များစွာပါ။ Apple ရဲ့ အနာဂါတ် ကို Presentation ပေး တဲ့အထဲမှာ Meaningful Partner အကြောင်း ရောက်လာပါတယ်။ Apple ရဲ့ Meaningful Partner ဟာ Microsoft လို့ ကြေငြာခဲ့ချိန် မှာတော့ လူတွေကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ Microsoft နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်မဲ့ နေရာတွေ အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ အဲဒီနောက် Microsoft ကနေ Apple မှာ $150 million ပိုက်ဆံထဲ့်မဲ့ အကြောင်း ပြောရင်း Special Guest တစ်ယောက် ကို Projector Screen ပေါ်ကို တင် ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ Bill Gates ပါဘဲ။ Bill Gates မျက်နှာ ပေါ်လာချိန် လက်ခုပ်သံ တွေ ကြားမှာ “ဘူး” သံတွေ လဲ ပါပါတယ်။
Bill Gates က သူနဲ့ Steve Jobs အရင်က အတူအလုပ်လုပ် တာဟာ သူ့ဘဝရဲ့ Career မှာ “Some of the most exciting work” လို့ စခဲ့ပြီး မကြာခင် Macintosh ပေါ်မှာ run မဲ့ Mac Office 98 အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ ပါ တယ်။
Bill Gates အပြီး Steve Jobs ပြောခဲ့တဲ့ အထဲမှာ စကားတစ်စုကို ကျွန်မ အလွန် သဘော ကျ ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ –
Apple ရဲ့ အနာဂါတ် ကို တဖန် ပြန်လည် ရှင်သန် တောက်ပ အောင်မြင် စေချင်တယ် ဆိုရင် – “Apple နိုင်ပြီး Microsoft ရှုံးရမယ်” ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် စိတ်ဓာတ်မျိုးကို ဖယ်ရှား ပြစ်ရပါမယ်။ “Apple နိုင်ဖို့ Apple ကဘဲ အရမ်းကောင်းအောင် လုပ် ရမယ်” ဆိုတဲ့ အတွေးစိတ်သာထားရပါမယ်။ တစ်ခြားသူ တွေရဲ့ အကူအညီရမယ် ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပါဘဲ။ တကယ်လို့ Apple က ကောင်းအောင် မလုပ်နိုင်ရင်၊ဒါဟာ တစ်ခြားဘယ်သူရဲ့ အပြစ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ Apple ရဲ့ အပြစ်ပါဘဲ။ ဒါဟာ အလွန်အရေးကြီး တဲ့ ခံယူချက် လို့တွေးပါတယ်။
Microsoft Office ကို Mac ပေါ်မှာသုံးချင် ရင်၊ ဒီ Software ကိုထွင်တဲ့ Company ကျေးဇူးလေးတင်တတ်ကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ Software တွေကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့ အတွက်ကတော့ Apple နဲ့ Microsoft ရဲ့ကြား က ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဟာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ အခုအခါဟာ Apple ပြန်လည် ရှင်သန်ဖို့ အချိန်ပါဘဲ။ Industry ထဲကို Apple ရဲ့ အံ့မခမ်းတဲ့အရာတွေ ပေးစွမ်းဖို့၊ Apple တဖန် ပြန်လည် ရှင်သန် တောက်ပ အောင်မြင် ဖို့ အချိန်ပါဘဲ။
ကျွန်မ အတွေး က – Steve Jobs ဟာ Bill Gates ဆီ က ရတဲ့ Investment ငွေ လောက် ကတော့ တစ်ခြားမှာလဲ ရချင်ရင် ရနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လိုတဲ့အချိန် သူ ပထမဆုံး အကူအညီ တောင်း ဆက်သွယ် ခဲ့သူဟာ Bill Gates ပါဘဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ Microsoft နဲ့ Technical ကိုပါပေါင်းလုပ် မှ Apple ပြန်ရှင် မယ်ဆိုတာ တွက်လို့သာပါ။
Bill Gates ဘက်ကရော Genius Steve Jobs အကြောင်းကို မသိဘဲ နေပါ့မလား။ သူ့ကို ပြန် ကျော်တက် သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ သိရက် နဲ့ ဝင်ကူခဲ့တာဘဲ။ ဘယ်လောက် Professional ဆန်ကြပါသလဲ။ တနည်းကြည့်ရင်လဲ သူတို့ဟာ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်သူတွေ၊ စိန်ခေါ်မှူကို နှစ်သက်သူတွေ အဖြစ် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ Keynote Video ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်မ အဲဒီလူ နှစ်ယောက် စလုံးကို တကယ် လေးစားမိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Steve Jobs ဟာ Apple ကို သူပြောခဲ့သလိုဘဲ အံ့မခမ်းဖွယ် ထက်တောင် ပိုပြီး ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် မေလ All Thing Digital ဆိုတဲ့ Online Publication Show ပေါ်မှာ Steve Jobs နဲ့ Bill Gates ကို အတူတွဲပြီး မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတိတ်၊ လက်ရှိ ကာလ အခြေအနေ နဲ့ အနာဂါတ်အတွက် ရည်မှန်းချက် တွေ၊ သူတို့ ရဲ့ Product အကြောင်းတွေ၊ သူတို့ နဲ့တွဲ လုပ်တဲ့ အခြားသူတွေ အကြောင်းတွေ – ပြောခဲ့ကြ ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်ဖော်ပြပါ Link မှ အသေးစိတ် ဖတ်နိုင်ပါ တယ်။ ကျွန်မ ကတော့ ကျွန်မ အလွန်ကြိုက်ပြီး Highlight လုပ်လိုက် တဲ့ သူတို့ ရဲ့ စကား တစ်ချို့ကို မျှဝေ ပါရစေ။ အမှန်တော့ ဒီမေးခွန်းဟာ Interview လုပ်သူရဲ့ နောက်ဆုံး မေးခွန်းပါ။ “သူတို့နှစ်ယောက် ရဲ့ Relationship အကြောင်းပေါ့”
အဲဒီမှာ Bill Gates ဖြေခဲ့တာက –
အလုပ်အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေဟာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းခဲ့ပါတဲ့။ အခုအချိန်မှာ အတူ မရှိနိုင်တော့တဲ့ သူတစ်ချို့ ကိုလည်း သတိရ တတ်ပါတယ်။ ဒီ Industry ထဲမှာ ဝင်လာသူ တွေရော၊ ထွက်သွားသူတွေပါရှိတယ်။ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက် – အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အရာတွေ ရော၊ မဖြစ်တာတွေကိုပါ နားလည်သူ တစ်ယောက်ဟာ အနားမှာအမြဲ တမ်း ဆက်ရှိ နေ မယ် ဆိုရင် တော့ အရမ်းကို ကောင်းတာပါဘဲ။ သိတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။ Industry ဆိုတာက အသစ်အသစ် သော အရာတွေ က အမြဲတမ်း ဖြစ်နေတာမဟုတ်လား။ လူတွေရဲ့ အမြင်မှာ အောင်မြင်တဲ့ Company ဆိုတာ တစ်ချိန်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ အမြင် ရှိတယ်။ အဲဒီလိုမှာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကြားက အရေးတကြီး လိုအပ်လာတဲ့ အခါမျိုးမှာ စွန့်စားပြီး အသစ်အဆန်းတီထွင်တဲ့ လူတွေ ရှိနေတာဟာ အလွန်ဟန်ကျလှ ပါတယ်။
it’s been fun to work together. I actually kind of miss some of the people who aren’t around anymore. You know, people come and go in this industry. It’s nice when somebody sticks around and they have some context of all
the things that have worked and not worked. The industry gets all crazy about some new thing, you know, like, there’s always this paradigm of the company that’s successful is going to go away and stuff like that. It’s nice to have people seeing the waves and waves of that and yet, when it counted, to take the risk to bring in something new.
Steve Jobs ကတော့ တိုတို ရှင်းရှင်းပါဘဲ။
Bill နဲ့ ကျွန်တော် ပထမဆုံး တွေ့ပြီး အလုပ်အတူလုပ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် လုံးဟာ အခန်းထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးပါဘဲ။ ကျွန်တော်က ၆လပိုကြီး တယ်ဆိုပေမဲ့ အရွယ်တူပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်ရာ Company တွေ အတွက် လုပ်နေကြတယ်။ ခင်ဗျား တော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်က တော့ အခန်းထဲမှာ အကြီးဆုံးသူ အချိန်များများ ဖြစ်နေတာပါဘဲ။ ဒါကြောင့် အခုဒီမှာ ရှိနေတာကို နှစ်သက်တာပါ။
ကျွန်တော်က ဘဝအကြောင်းအရာ အတော်များများ ကို Bob Dylan သီချင်း လို၊ Beatles သီချင်း လိုလို့ တွေးမိတယ်။ ခုလဲ Beatles သီချင်း တစ်ပုဒ်ထဲ က စာကြောင်း လေး တစ်ကြောင်း က “မင်းနဲ့ ငါ ရဲ့ အမှတ်ရစရာ တွေဟာ ရှေ့ဆက်မဲ့ ခရီး အရှည် ထက် ပိုပါတယ်။” အဲဒါဟာ ဒီမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို မှန်ပါတယ်။
You know, when Bill and I first met each other and worked together in the early days, generally, we were both the youngest guys in the room, right? Individually or together. I’m about six months older than he is, but roughly the same age. And now when we’re working at our respective companies, I don’t know about you, but I’m the oldest guy in the room most of the time. And that’s why I love being here.
အဲဒါနဲ့ Interview ကို အပိတ်မှာ Interview လုပ်သူ အမျိုးသမီး က “ကျွန်မ တော့ မျက်ရည်လည်မိပြီ” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ကျွန်မ က ရော ……….
– ငွေကြေးထက် တီထွင်ချင်စိတ် တွေကို ရှေ့တန်းထား တဲ့
– စွန့်စားမှုကို ကြိုက်ပြီး ရှုံးနိမ့်ခြင်း ဆိုတာတွေ ကို မမှုတဲ့
– အရေးကြုံရင် ပြိုင်ဖက်လို့ စိတ်ထားတာထက် ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီ စိတ် ထားတတ်ကြတဲ့
– သူတို့ နှစ်ယောက် ပြန်ပေါင်းချိန် “ဘူး” လုပ်ခံရတဲ့ အသံတွေ ကို လစ်လျုရှုပြီး ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုကိုယ် ကောင်းအောင် အာရုံထား ဆက်လျှောက် ခဲ့ကြတဲ့
– ကိုယ့်ရှုံးနိမ့်မှု ဟာ ကိုယ့်တာဝန်လို့ အတွေးအခေါ် အယူအဆရှိတဲ့
– ကိုယ့်ပြိုင်ဖက် ကို ရှင်သန်စေရင်း သူတို့ ရဲ့ အားနည်းမှု၊ အားသာမှုတွေ ကနေ ပညာယူတတ်တဲ့ ……. စသဖြင့်
ကျွန်မ နဲနဲ လေးသားသိတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်အကြောင်း မှာ သူတို့ ရဲ့ လေးစားဖွယ် စိတ်ဓာတ် ကောင်းကွက် တွေကို မြင်ပြီးတဲ့ နောက် ကျွန်မ လဲ မျက်ရည်ဝဲ တဲ့ အထိ ခံစားမိခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ ကျွန်မ အတွေးတွေ ထဲမှာ
” ပြိုင်ဖက် ဆိုတာကို ချစ်တတ် တဲ့ အပြင် အဲဒီပြိုင်ဖက် နဲ့ ညှိနှိုင်း ပြီး အတူတွဲလုပ်နိုင်တဲ့ သူ နှစ်ယောက် တွေ့ရင် သူတို့ ပါတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကြီးမားပြီး အင်အားရှိတဲ့ အံ့မခမ်းဖွယ်ရာ တိုးတက်မှုတွေကို ဖြစ်ခဲ့စေတာဘဲ”
နှစ်သစ်မှာ ရွာသူ/သား အပေါင်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
စာကြွင်း – တကယ်တော့ Steve Jobs နဲ့ Bill Gates တို့ ရဲ့ အတိတ်အကြောင်းတွေ မှာ အဆိုးမြင် ဖွယ်ရာ အချက် တွေလဲ အများကြီး ရှိပေမဲ့ သမိုင်းကြောင်း မှာ တော့ သူတို့ ဟာ ကျွန်မတို့ အားလုံးရဲ့ အားကျဖွယ်ကောင်းတဲ့ Role Model တွေ အဖြစ် ရှိနေတော့ မှာတော့ ကျွန်မ ပြောရင် ပို လွန်းတယ် ပြောကြမလား ဆိုတာတွေးမိရင်း ……
(ဘာသာပြန် အချိုးမကျ နိုင်တာ သည်းခံကြပါ၊ အမှားပါရင်လဲ ပြင်ပေးကြရင်ဖြင့် အားလုံးအတွက် အတိုင်းထက်အလွန် အကျိုးရစေမှာပါ)
Apple & Microsoft History
Apple Keynote 1997 – Boston Macworld expo
All Things Digital Conference 2007 – D5
John Sculley ကြီးကို လူဇိုးဂျီးလို့ မစွပ်စွဲလိုက်ပါနဲ့ အစ်မတော်ရယ်….
သူလည်း လူတော်ဂျီးဘာ .. ဂီဂီတို့ ဂိုဏ်းက ဆြာဂျီးပါ…..
ဟိုတလောက အစ်မတော် ပြတဲ့ မူဗီမှာတောင် ပါလိုက်ပါသေးတယ်….
အဲ့သည့်အချိန် ဂျော့ဘုစု ကို သူကန်ထုတ်တဲ့အကြောင်း… သူသည် Cash flow ကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပီး
ဂျော့ဘုစုက innovating , R&D ကို ဦးစားပေးခဲ့ကြတာပါ..(ရှုံးနေတဲ့ကြားက တီထွင်မှုကို ဦးဇားပေးချင်တဲ့
ဂျော့ဘုစု ကို ဘုတ်အော့ ဒါရိုက်တာစ် ကပါ အယုံအကြည်မရှိလို့ သူလွင့်ရတာပါ…. စကူလီ ယုတ်မာခဲ့တာ
မဟုတ်ပါဘူး ..) သည်အကြောင်းကို နောင်တချိန်မှာ သူတို့ ရယ်ရယ်မောမော နဲ့ ပြန် ပြောဆိုသွားခဲ့တာ တွေ့မှာပါ
နောက်တချက် ၁၉၉၇ မှာ ဂျော့ဘုစု ပြန်လာတော့ အရင် ဂျော့ဘုစု မဟုတ်တော့ ဘာဘူး….
အရင် ဂျော့ဘုစုက innovation ပဲဇောင်းပေးတာ ….(လူကြားထဲ တော်ကီရောင်းတတ်တာကလွဲလို့ ….
ဘစ်ဇနက် စကေးလ် ညံ့ဖျင်းခဲ့ဖူးတယ်ဗျ…) …. ပြန်လာချိန်မှာ သူဟာ မာကတ်တာ ကောင်း တယောက် ဖြစ်နေပြီ
innovation skillလည်း လျော့ကျမသွားပဲနဲ့ပေါ့… ဒါတွေ ဘယ်က တတ်လာတာထင်ပါသလဲ ….
ဟုတ်ကဲ့ …Apple စတင်ချိန်မှာ ဒေါ်လာ ၂သိန်းခွဲ ထုတ်ပေးပြီး godfather လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ IBM က marketer ဟောင်း
မာ့ခ် မာကူးတား နဲ့ …ယုတ်မာတဲ့ မာကတ်တာ လူဇိုးဂျီး ဂျွန်စကူလီ ဆီက တတ်တာပါခင်ဗျား …
စကားမစပ် innovation နဲ့ invention ကို လေနဲ့ဝမ်း မကွဲတဲ့ လူကလည်း များသဗျာ…
ဂျော့ဘုစု က အင်နိုဗေတာ ပါဗျာ …..မမှားပါဘူး…
အက်ပဲအကြောင်းပြောရင် …ဂီ့ကို သတ်ချင်တဲ့လူပေါဒယ်….
အစ်မတော် စိတ်ဝင်စားရင်ဖြင့် ဂီရေးဖူးတဲ့ စာစုလေး …မျှဝေတယ်နော…
မလတ်ရေ ကျမက IT မှာတော့ ဘာတခုမှ မသိပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ အလှူအတန်းတွေကြောင့်နဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ Apple products တွေ ကြောင့်ပါ….ခုလိုပြောပြတဲ့လူရှိတော့လည်း ပိုပြီး သိရတာပေါ့….
ဘီလ်ဂိတ်ကို လေးစားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တခုက သူဟာ တကယ့်ကိုသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေမှာ အသုံးချခဲ့လို့ရယ် အနောက်ကမ္ဘာမှာ ရှားပါးလှတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ….
ဘီလ်ဂိတ်ပြောတဲ့စကားတွေ ထဲက မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတဲ့ စကားလေးကတော့
စတိဗ်ကတော့ သိပ်တော်တဲ့ပါရမီရှင်တယောက်လို့ ထင်ပါတယ်….
နောက် Apple product တွေကို ခရေဇီဖြစ်တဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ တီဗွီမှာ စတိဗ်ဆုံးတဲ့နေ့မှာပဲ သူ့ အကြောင်း တွေပြောပြပြီး သူ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြတော့ စိတ်မခိုင်ပဲ တော်တော်ကြာကြာထိုင်ငိုခဲ့ပါတယ်..ဒါလေးကလည်း သူ့ကို ခရေဇီဖြစ်တဲ့ လူတွေ ရဲ့ရင်ထဲမှာ သူဟာ ဘယ်လောက်တောင် လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ သူလည်း ဆိုတာလေးပါ…..
သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ တော်တော်လေး စိုးမိုးနိုင်တဲ့ လူတော်များလို့ ကျမကတော့ ဆိုချင်ပါတယ်
ဂီဂီရေ – သူတို့ဘက်ကကြည့်တော့ သူရဲ ကောင်း၊ ငါတို့ဖက်က ကြည့်တော့ သစ္စာဖောက်
Oppppppssss…. ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူးနော်။ ;-)
ဂီဂီ ပြောတာမှန်ပါတယ်။ Steve Jobs ဟာ Apple ကို ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်အဝင်မှာ အများကြီး ပြောင်းသွားတယ် ဆိုကြပါတယ်။
Bill Gates ရဲ့ Business Mind ရှိတာမျိုး ကိုလဲ သူ့ဆီမှာ ရှိချင်တယ် ဆိုဘူးပါတယ်။
သူပြောတဲ့ Bill Gates ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ တီထွင်တတ်သူ မဟုတ်ဘူး။ Microsoft ရဲ့ Product တွေဟာ taste မရှိဘူးတဲ့။
ဟုတ်တာပါဘဲ။ LOL :-)
ဖြည့်ပြီး Share လုပ် ပေးတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
Pooch ရေ – ကျေးဇူးဘဲနော်။
အစ်မ လဲသိပ်သိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စကားမျိုးလေးတွေကို Share လုပ်ပေးတာပါ။
အဲဒီကနေ ကိုယ်ပါမသိတာတွေ သိလာရတယ်။
Steve Jobs ကွယ်လွန်ခြင်း ဟာ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးခြင်း ထဲမှာပါပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းပါစေကွယ်။ :-)
ဒီ Industry ထဲက အတွင်းလူတွေက သူတို့ ၂ယောက်နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ သည်လိုဆိုကြတယ်ဗျ …
သူတို့တော်တဲ့နေရာတွေ အလွန်များပေမယ့် ညံ့တဲ့အချက်လေးတွေပဲ ရွေးပြောကြကြေးဆို …
ဂျော့ဘုစု ဟာ ကိုယ်ချင်းစာ တရား ခေါင်းပါးတဲ့လူ ဖြစ်ပြီး ဂိတ်စ် ကတော့ ဒီဇိုင်းပိုင် အမြင် မရှိသူပါတဲ့..
ဂျော့ဘုစု ဟာ Give meapony ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ကျော်ကြားလှပါတယ်..သူ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကို
သူတောင်းဆိုတာ ပါ ….. အနောက်တိုင်းမှာ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေထဲက ဇာတ်လိုက်ကျော် ဖြစ်ပြီး ..
ကလေးတိုင်းလိုချင်တဲ့ .. မြင်းပုလေး ပေးစမ်းပါ လို့ ပြောလေ့ရှိတာ …..တင်စားတာပေါ့ဗျာ…
တကယ်ကတော့ လူတိုင်းလိုင်ချင်မယ့် business model မျိုး idea မျိုး …အတွေးအခေါ် အယူအဆမျိုး
ကို ဦးနှောက် မုန်တိုင်း ထန်စေတာပါတဲ့ ……
ဂျော့ဘုစု အကြောင်းပြောရရင် …ကျနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်….
သူ့ကို ကျနော် သိပ်လေးစား အားကျတာကိုး …သို့သော် …လူတွေက သူ့အပေါ်အမှတ်မှားကြတယ်..
သူ့ အရည်အချင်း အစစ်အမှန်တွေကို မမြင်ဘဲ …တီထွင်သူကြီးလို့ တံဆိပ်ကပ်ကြတယ်….
သူ့ အရည်အချင်းအမှန်တွေကို ဆွေးနွေးရင်း သူမကောင်းခဲ့တာတွေ ကိုပြောပြမိတော့ ….
သူ့ ကို ကိုးကွယ်သူလူတန်းစားက ..ကျနော့် သတ်ချင်ရောဆိုပါတော့ …
တကယ်က ဂျော့ဘုစု က သနားဖို့ကောင်းခဲ့တာပါ ..၂၀၀၄ မှာထင်တယ်..သူ့မှာ pancreas cancer
ရှိတယ် ဆိုတာ diagnose ဖြစ်လာတော့ …သူက ဆြာဝန်တွေကိုမေးတယ် ..ဆေးနဲ့ ထိန်းနိုင်မလား..တဲ့
ခွဲစိတ်ရရင် အလုပ်ပျက်မှာစိုးလို့ …ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ …လို့ဖြေကြတယ်..
(ဗမာစားက ရှုပ်တယ် …သည်မှာပြောခဲ့တာ yes, we can မဟုတ်ဘူးနော် …yes, it”s possible)ပါ
ရနိုင်ကောင်းပါ၏ လို့ ပြန်ရမလိုပဲ …..ထားတော့ ….သူဆေးစားတယ်…သူ သတ်သတ်လွတ်သမား
ဖြစ်လာတယ်…တခါတလေ ..ဟင်းရွက် တမျိုးတည်း စားတယ်တဲ့ ….သူ့ရဲ့ food intake style ကို
ပါပြောင်းပြီး ရောဂါ ကို အန်တုကြည့်တာပေါ့ဗျာ…
ဇန်ဝါဒ အယူကိုယူတဲ့ ဂျော့ဘုစု ရဲ့ …နည်းနည်း အစွန်းရောက်သွားတဲ့ အချက်တွေပေါ့….
(သဂျီးဖတ်ပါနော် ……ပီး …သတိလည်းထား …ကျုပ်လည်း သတိထားရမယ် ..ကျုပ်လည်း applied
Zen ကို ယူထားလို့ပါ)
နေ့စဉ်တော့ ည ၁၀နာရီထိ …အလုပ်လုပ်သတဲ့လေ …သမီးကြီး Lisa က ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်
ရပ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် … ကျန် သားသမီးငယ်တွေ အိပ်နေချိန်မှ ဂျော့ဘုစု အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တာတဲ့…
နောက်ဆုံး ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ပျံ့ကုန်တော့မှ …အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး မကုလို့ မရတဲ့
အသည်းကို transplant လုပ်ခဲ့တာပါ.. Switzerland ၂၀၁၀ထင်တယ် ….timeline အရပြောရရင်
သည်ကြားမှာ …သူ့ အသက်သူလောင်ကျွမ်းခံပြီး ဘာတွေ ထုတ်ကုန်အဖြစ် တင်ပို့ နိုင်ခဲ့သလဲ ….
၂၀၁၁ ကို အာဏာရှင်တွေ ကျဆုံးခန်းတဲ့ ….ပြောကြတယ် ..ဘင်လာဒင် ၊ ကဒါဖီ ၊ ဂျော့ဘုစုနဲ့
ကင်မ်ဂျုံအီလ် တို့ကိုရည်ညွှန်းသပေါ့…. သည် list မှာ ဂျော့ဘုစု ကို ထည့်ရတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး
သို့သော် အမှန်တရား တခု တော့ဖြစ်တယ်ဗျ …သူ့ အုပ်ချုပ်ပုံ ၀န်ထမ်းတွေကို ဆက်ဆံပုံ …..
ဓါတ်လှေကားစီးရင်းတောင် အပြောအဆိုမတတ်ရင် အလုပ်ထုတ်တတ်ပုံအရ …တစ်ဦးတည်း
အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ပြီး …. အကြောက်တရားနဲ့ brain storm လုပ်ယူတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးပါပဲ…
ကင်မ်ဂျုံအီလ်သေတော့ ပြည်သူတွေက ဂီးဆောင်ဂျောင်းဟာ ..တိုင်းပြည်တာဝန်ကို နေ့မအား ညမနား
ထမ်းရွက်ခဲ့လို့ …ပင်ပန်းပီး ကံတော်ကုန်ရရှာပါတယ်လို့ ဖော်ပြပါရှိတယ်. …. မှန်မမှန်တော့ လေ့လာသူ
တွေပဲ သိမှာပါ …ကျနော် သိတာကတော့ အနှီ ဂုဏ်ပုဒ်သည် ..ဂျော့ဘုစု နဲ့မှ လိုက်ဖက်တာဗျ…
ဟုတ်တယ် သူက အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ကြိုးစား ဖော်ဆောင်သွားခဲ့တာ ….အလုပ်ရှင်အနေနဲ့ဆိုလည်း
လူဇိုးကြီး ဘူဇွာကြီး အဖြစ်ခံခဲ့တာ …ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့အစားထဲကတော့
မဟုတ်ခဲ့ဘူုး …innovation အတွက်ဆိုရင်..ငါ့အသက်ကိုတောင်ရင်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်မယ် မင်းတို့လည်း..
ညီစေဟေ့ -ညီမယ် ..ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး sacrificed လုပ်ခဲ့တာမျိုးပါ ….
iPod, iPhone, iPad user တွေ ခံစားနားလည်စေချင် ပါသည် ….ခင်ဗျားတို့လက်ထဲကိုင်ထားတာတွေက
ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို ထုဆစ်ခဲ့တဲ့ …ပဂေးကြီးတယောက် ..ရဲ့ အသက် အသွေးအသား တွေဆိုတာ..
သူ့ရောဂါ အကြောင်း တော့ ကြားဘူးနားဝ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ခေါင်းမာတတ် တာဟာလဲ သူ့ကိုသူမတူအောင် ထူးချွန်စေမဲ့ အကြောင်းဖြစ်စေခဲ့သလား။
တကယ်တော့ သူ နေ့၊ည မအား အလုပ်လုပ်တာဟာ တစ်ခြားအချက် တွေထက် သူ့ ရဲ့ ego needs အတွက်ပါ။
အဲလိုလုပ်နေရတာကို က သူ့ စိတ် ရွှင်လန်းခြင်းတွေကို ဖြစ်စေသတဲ့။
အမှန်တော့ နောက်ဆုံး မှာ သူ့ စိတ်ကို သူ့ရုပ် က မလိုက်နိုင်တော့တာ နေမှာပါ။ :-(
သူ့Product တွေထဲမှာ သူ့ ရဲ့ ကျေနပ်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း တွေ အပြည့် ပါခဲ့တယ် ဆိုတာ …….. တွေးကြည့်တာပါ။
Thanks for your long & kind reply. :-)
အယ် ..မဟုတ်တာ အစ်မတော်ရယ်…
အစ်မတော်လို ပြည့်ဝ ထူးချွန်တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်နဲ့
စကားပြောခွင့် ဆွေးနွေးခွင့် ရခြင်းကကို My pleasureပါ….
စကားပြောခွင့် ဆွေးနွေးခွင့်ရလို့ …ကျေးကျေးပါနော်..
Wowwwww ….. + နဲ့ စိမ်းပြ၍ မရတော့။ ;-)
ဗဲဒီးတော့ တော်တော်ဂွတ်တယ်လို့ ပဲ
အစ်မတော် တယောက်ရွာထဲရောက်လာတာ ..ကျနော်တော့် အလွန်ဂုဏ်ယူလျက်..
ရေးသက်နုပေမယ့် ….အစ်မ မခင်လတ်က …ရွာသူတွေထဲမှာ ..ကျနော်လေးစားရတဲ့စာရေးသူ ရယ်ပါ…..
ရွာ့ ကလေကချေက သည်လို ပြောလို့တော့ ..မငြိုငြင် ပါနဲ့နော် …..
(ကျနော် လွတ်ထွက်သွားတဲ့အချက်လေးတွေကို .. ပညာပေးခဲ့လို့ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဗျာ…)
အမတော်ရဲ့ တူးဆွမှုကို ဝေဖန်အကြံပေး.ဆွေးနွေးပေးတာပဲ အမတော်ကအထူးပဲ ကျေးဇူးတင်
(ကိုမ) ခင်လတ်ရေ – ကျွန်မ ကိုယ်စားဖြေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်မ နာမယ် နဲ့ ကို”ငပေါက်ဖော်” ရဲ့ avatar ကို တွဲထားနိုင်တာ အံ့ဖွယ်သုတပါဘဲ။
အဲဒီ ပညာလေး ကို ရွာမှာ မျှပေးပါဦး။ ;-)
တကဲ့ magic ဘဲ။
ခင်လို့ စတာ။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ မောင်နှစ်မတွေဘဲ။
အင်မတန် ရုပ်ဆိုးတဲ့ ယမမင်းကြီး လိုဘဲ “ဒါတော့ မှန်တာပြောတာ ပြောပါစေကွယ်”။ ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေးကို သတိရမိ၏။
ကို “ငပေါက်ဖော်” ရေ – မှတ်ချက်လေး အတွက် တော်တော် ဘစ် တဲ့ သန့်ကယူးကြီး ပါ။
အားပေးမှုကြောင့် ကျွန်မ အချိန်ကုန် ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ :-)
အမ ရေအမရေးပြဝေဖန်သွားတာလေးထဲက ကြိုက်တာလေးကိုယူ၍ ပြန်မန့် လိုက်ပါရစေ
Bill Gates ဘက်ကရော Genius Steve Jobs အကြောင်းကို မသိဘဲ နေပါ့မလား။ သူ့ကို ပြန် ကျော်တက် သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ သိရက် နဲ့ ဝင်ကူခဲ့တာဘဲ။ ဘယ်လောက် Professional ဆန်ကြပါသလဲ။ တနည်းကြည့်ရင်လဲ သူတို့ဟာ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်သူတွေ၊ စိန်ခေါ်မှူကို နှစ်သက်သူတွေ အဖြစ် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မောင်သန်းထွဋ်ဦး ရေ- စိတ်ဝင်တစားဖတ်တာ ကျေးဇူးပါဘဲ။ ဒီလို comment တွေဟာ နောက် Post အတွက် ခွန်အားတွေပါဘဲ။ :-)
မလတ်ရေ- သူမတူအောင် တူးဆွပြီး ကိုယ့်အတွေးအမြင်လေးပါ ဖြည့်စွက်ပြီး ရေးလိုက်တဲ့ စာပေဟင်းလေးအိုးကြီးက အနှစ်သာရတွေပြည့်လွန်း လေးပင်လွန်းလို့ မနည်းဖတ်ယူရတယ်။ မန့်ဖို့တောင် နောက်ကျသွားတယ်။ ;)
Professional နဲ့ Personal ကိုကွဲအောင်နေတတ်ကြတယ်…
Personal Feeling က သပ်သပ်…Professional က သပ်သပ် ခွဲခြားနိုင်ကြတယ်….
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတော့ အပြင်မှာကြည့်မရရင် အလုပ်ထဲမှာကွိုင်တက်တော့တာပဲ..